Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Baasaboor dhexdhexaad ah oo jinsiga ah ayaa markii ugu horreysay laga bixiyay Maraykanka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • LGBTQ • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Baasaboor dhexdhexaad ah oo jinsiga ah ayaa markii ugu horreysay laga bixiyay Maraykanka.
Warku waxa uu soo baxay saddex bilood ka dib markii ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka siisay ikhtiyaarka ah in ay jinsigooda ku beddelaan baasaboorkooda iyada oo aan la siin dukumentiyo caafimaad si ay u caddeeyaan isbeddelkooda.
Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday soo saarista baasaboorkii ugu horreeyay ee dhexdhexaad ka ah jinsiga.
Qaar ka mid ah gobolada Mareykanka waxay ogolaadaan dadka aan binary-ga ahayn inay u aqoonsadaan inay yihiin 'X' shatiga darawalnimada ama noocyada kale ee aqoonsiga.
Aqoonsiga dhexdhexaadka ah ee jinsiga ayaa ahaa hal ballan oo Joe Biden uu u sameeyay bulshada LGBT ee ku guda jira ololaha.
The Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka Arbacadii ayaa lagu dhawaaqay in ay soo saartay baasaboorkii ugu horreeyay ee Mareykan ah oo dhexdhexaad ka ah jinsiga.
Sida laga soo xigtay Waaxda GobolkaAfhayeenka Ned Price, Mareykanka wuxuu sii wadaa inuu qaado tillaabooyin lagu muujinayo sida ay nooga go'an tahay horumarinta xorriyadda, sharafta, iyo sinnaanta dadka oo dhan - oo ay ku jiraan LGBTQI+ muwaadiniinta Mareykanka."
Waaxda Gobolka Sarkaal ayaa sheegay in codsade kasta uu dhawaan awoodi doono inuu doorto 'X' halkii uu ka dooran lahaa lab ama dhedig dhaqameed.
Warku wuxuu soo baxay saddex bilood ka dib Waaxda Gobolka Waxay siisay trans Americans ikhtiyaarka ah inay jinsigooda ku beddelaan baasaboorkooda iyagoon bixin dukumeenti caafimaad si ay u caddeeyaan kala-guurka. Waqtigaas, Xoghayaha Arimaha Dibada Tony Blinken ayaa sheegay in saraakiishu ay wali "qiimeynayeen habka ugu wanaagsan" ee ikhtiyaarka aan binary ahayn.
Qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ayaa u oggolaanaya dadka aan binary-ga ahayn inay ku aqoonsadaan 'X' shatiga darawalnimada ama noocyada kale ee aqoonsiga, iyo dalal dhowr ah ayaa horey u oggolaaday ikhtiyaarka jinsiga saddexaad ee baasaboorka. Waxaa ka mid ah Argentina, Canada, iyo New Zealand, halka in ka badan 2022 waddan oo kale ay bixiyaan baasaboorka jinsiga saddexaad ee dadka isku jinsiga ah ama aan binary ahayn xaaladaha qaarkood. Doorashada ayaa la heli doonaa dhammaan codsadayaasha Mareykanka horraanta XNUMX.
Aqoonsiga dhexdhexaadka ah ee jinsiga ayaa ahaa hal ballan oo Joe Biden uu u sameeyay bulshada LGBT ee ku guda jira ololaha. Ololihiisu waxa kale oo uu ballan qaaday in uu “LGBTQ+ shakhsiyaadka ka ilaalinayo rabshadaha,” in la balaadhiyo ilaalinta sharciga ah ee dadka beddela, iyada oo la marayo sharciga sinnaanta, iyo in la siiyo dhallinyarada beddelka ah in ay galaan musqulaha iyo qolalka labiska ee ay doortaan.